Puntland oo ku dhawaaqday Lacag Cusub oo ay keeneyso Deegaanadeeda – SBC
Puntland oo ku dhawaaqday Lacag Cusub oo ay keeneyso Deegaanadeeda
Kulan saxaafadeed ay ku qabteen Xarunta wasaarada Maaliyada Puntlande Garoowe wasiirka wasaaradaasi Faarax Cali Jaamac iyo Gudoomiye yaasha Bangiyada Puntland ayaa waxay ku shaaciyeen in dowlada Puntland ay go’aansatay Lacag cusub oo ay daabacaneyso.
Faarax Cali Shire wasiirka Maaliyada waxa uu intaasi ku daray in lacagta la soo daabacayo ay hormuud ka yihiin dowlada KMG ah iyo Puntland islamarkaana ay dalka soo geli doonto dhamaadka bishan .
Isagoo faah faahinaya lacagtan ayuu sheegay in ay noqon doonto mid u kala qeyb san lix nuuc oo kala ah 1000,2000,5000,10000,20000,50000 islamarkaana ay tahay shiling somali ayna bedeli doonto tan iminka suuqa ku jirta .
Sidoo kale Waxa uu ka hadlay wasiirku lacagaha sarifk doorlarka oo hoos u dhacay islamarkaana loo sababeynayo lacagihii shiling soomaaliga ahaa oo yaraaday, ayna dowladu ku dhawaaqeyso canshuurihii ay ganacsatada ka qaadeysay lagu qaadayo %50 Shiling Somali halka 50ka kalena lagu qaadayo lacagta qalaad.
Hadalka ka soo yeeray dowlada Puntland ayaa noqonaya mid gees u ridaya isku dhexyaac dhowaalahan ku kala jiray sarifka doolarka oo hoos u dhacay iyo qiimeyaasha maciishada oo kacsan.
waan soo dho way nay naa hadii aanu nahay dhalin yarada reer punt land bedelida lacag ta waana hila yaa inay wax badan naga bedeli doon to dhamaan umadana ay ka faa di doo naan
Maxamed cabdi xuseen says:
Waxaa nasiib daro ah in siyaasiga somaliye uu san fahansaneen qeymaha lacagta jabjabka ah maxaa wacay lacag aan jajab laheyn qeyma malahan waxeyn sawabtaa dib u dhac sorry somaliyey
Aniga waxee ila tahay lacagtaasi wax horumar ma keeneso laakiim waxee keenesaa sicir baraar, maciishada oo kacda iyo burbur dhaqaalle.